March 1, 2020 - Tameelay
ဖြစ်နိုင်ရင် . . . ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါနဲ့ မုန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အရင်ပင်ပန်းရတဲ့ အလုပ်ပါ ။
March 1, 2020 Tameelay 0
လူတစ်ယောက်ကို မုန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ နေရာပေးနေခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ။ ငါ သူ့ကို မုန်းလိုက်တာဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တစ်ဖက်မှာ သတိတရတွေ ရှိချင်ရှိနေတတ်တာလေ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် . . . ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါနဲ့ မုန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အရင်ပင်ပန်းရတဲ့ အလုပ်ပါ ။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဖက်က […]
လူလူချင်းတူပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တွေတော့ မတူနိုင်ဘူး
လူလူချင်းတူပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တွေတော့ မတူနိုင်ဘူး သူလဲ ငါ့လိုပဲ တွေးမှာပါဆိုပြီး နေရာတကာ ကိုယ်နဲ့ ယှဉ်ယှဉ်ပြီး လိုက်တွေးနေလို့ မဖြစ်ဘူး လူချင်းပဲ တူတာပါ စိတ်ဓာတ်တွေ မတူကြဘူး ။ မွေးဖွားရာ ပတ်ဝန်းကျင်မတူတဲ့အခါ အမြင်ချင်း ခံယူချက်ချင်း မတူကြတော့ဘူး တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုးတဲ့ […]
ကိုယ့်ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနေတာကလဲ အတတ်ပညာပါပဲ ။
ပျော်ရာမနေရ တော်ရမှာ နေနေရတဲ့ ဘဝမှာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် ပျော်အောင် နေတတ်ဖို့လိုပါတယ် ။ အူဝဲဆိုပြီး ငိုခြင်းနဲ့ စခဲ့တဲ့ဘဝမှာ ပျော်အောင် နေသွားတတ်တယ်ဆိုတာလဲ အတတ်ပညာတစ်ခုပဲလေ။ မွေးကတည်းက တစ်ယောက်တည်းပါပဲ အခုမှ တစ်စုံတစ်ယောက်မရှိတော့လို့ မပျော်တော့ဘူးဆိုတာက အကြောင်းပြချက်သက်သက်ပါ ။ ပျော်အောင် မနေတတ်သေးတာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် ပျော်အောင် […]
သတိရရင် ဖုန်းဆက်လာမှာပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စောင့်ခဲ့ရပေါင်းလဲ များပါပြီ ။
သတိရရင် ဖုန်းဆက်လာမှာပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စောင့်ခဲ့ရပေါင်းလဲ များပါပြီ ။ ညနက်ခဲ့ပေါင်းလဲ များပါပြီ ။ အိပ်ပျော်ခဲ့ပေါင်းလဲ များပါပြီ ။ အဲ့ဒီများခြင်းတွေနောက်မှာ ဖုန်းလေးတစ်ချက်မှ ဆက်မလာ ခေါ်မလာခဲ့ဘူး ။စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ဖို့ထက် အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတဲ့ စိတ်ပူမှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံး ဖုန်းစဆက်ရတဲ့သူဟာ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် […]
ကျွန်မ . . . မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ သို့သော် မာယာတွေ မသုံးတတ်တဲ့ ခပ်တုံးတုံး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။
ကျွန်မ . . . မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ သို့သော် မာယာတွေ မသုံးတတ်တဲ့ ခပ်တုံးတုံး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ လိုအပ်နေတာအခါ အလိုက်သတိလေး ဖြည့်ဆည်းပေး လုပ်ပေးတတ်ပေမယ့် မလိုအပ်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီး ဧည့်ဝတ်မကျေတတ်ဘူး ။ အဲ့တာကပဲ ကျွန်မရဲ့ အားနည်းချက် ဖြစ်လာတာပါ ။ လူကြီး […]
လူဖြစ်ကျိုးနပ်စေရန် မတွေးသင့်သော အတွေးများ
မြတ်စွာဘုရားက အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတွေးသုံးမျိုးကို မတွေးနဲ့တဲ့။ တွေးလို့ရှိရင် လူဖြစ်ကျိုးမနပ် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မကောင်းတဲ့အတွေးသုံးမျိုးကတော့-“အဘိဇ္ဈာ၊ဗျာပါဒ၊မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ”တဲ့။ အဘိဇ္ဈာ- အဘိဆိုတာ သူများပစ္စည်းကို ဦးတည်ပြီး ဇ္ဈာ-ရချင်တဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်ကူးတာ။ သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အတွေးဟာ“သူခိုး၊ ဓားပြ” ဖြစ်စေတဲ့အတွေး။ အဲဒီအတွေးဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွေး ၊အကုသိုလ်အတွေး၊ မနောဒုစရိုက် လို့ခေါ်တယ်။ ဒီအတွေးမျိုး မတွေးသင့်ဘူး။ဒီအတွေးကို ရှောင်ရမယ်။ […]
” ချမ်းသာသောလူ ဆင်းရဲသောစိတ် “
ဗုဒ္ဓဒေသနာ၌ လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟူ၍ ရှိသည်။ လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာနှစ်ခုကို ပေါင်း၍ ကာမချမ်းသာ ရူပဗြဟ္မာ အရူပဗြဟ္မာတို့၏ချမ်းသာကိုတော့ ဈာန်ချမ်းသာ ဖလသမာပတ် ချမ်းသာကိုတော့ ဖိုလ်ချမ်းသာရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ငြိမ်းအေးသွားသော သန္တိသုခ အငြိမ်းဓာတ် အအေးဓာတ် ချမ်းသာကိုတော့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟု ဆိုသည်။ဈာန်ချမ်းသာက ဗြဟ္မာတို့သာ မဟုတ်။ဈာန်ရပုဂ္ဂိုလ် ဟူသမျှ […]